Maamulka Gobolka Banaadir oo burburiyey dhismayaal sharci darro ah ee Degmada Karaan – Walaal24 Newss
Maamulka Gobolka Banaadir oo burburiyey dhismayaal sharci darro ah ee Degmada Karaan
February 13, 2019	0	By walaal24
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Mudane Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa ugu baaqay bulshada Caasimadda in ay la shaqeeyaan laamaha ammaanka iyo hay’adaha ku hawllan dib u soo celinta dhulalka Danta Guud.
Eng.Yarisow oo dul istaagay waddada halbowlaha ah ee isku xirta Isbitaalka Keysanay iyo qeybaha kale ee degmada Kaaraan ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la furo waddadan, lagana banneeyo dhismayaashii sharci darrada ahaa.
Waaxda Howlaha Guud iyo Maamulka Degmada Kaaraan ayaa iyagoo fulinaya amarkii Duqa Muqdisho waxay burburiyeen dhismeyaal si sharci darro ah looga dhistay waddada Isbitaalka.
Guddoomiyaha ayaa sheegay in arrintan ay salka ku hayso cabasho ay soo gudbiyeen waxgaradka deegaanka iyo Maamulka Isbitaalka Keysanay, taas oo ku saabsanayd in gaadiidka sida bukaanada iyo gurmadka deg degga ah ay ka xireen dhismeyaashaasi waddadii halbowlaha u ahayd Isbitaalka.
Guddoomiyeha Gobolka Banaadir ayaa bulshada Caasimadda ku dhiirri geliyey in ay u midoobaan ilaalinta iyo daryeelka goobaha Danta Guud, maadaama ay muhiim u tahay nolasha bulshada iyo bilicda Caasimadda.
Guddoomiyaha ayaa ugu danbeystii digniin culus u jeediyey dadka dokumentiyada u sameystay iyo kuwa ka dalaala guryaha sharcidarada lagu degenyahay.
Tababar ku saabsan dambiyada abaabulan ee xiriirka la leh Safarada iyo dalxiiska oo magalada Muqdisho ka furmay
Diyaarad nooca yar oo ku burburtay Dalka Kenya oo sababatay dhimasho
Ciidanka Amniga oo magaalada Marka ku qabtay Dad siday waxyaabaha qaraxa
Golaha Wasiirada Koofur Galbeed oo Ansixiyay miisaniyada sanadkan iyo xeer hoostka
R/wasaare Khayre oo Shir-guddoomiyay Kulanka Todobaadlaha ah ee SMP3+Sawirro
Wasaarada Arimaha Gudaha oo sheegtay liiska Odayaasha dhaqanka Junaland aan mid sax aheyn
Xasan Sheekh ” korarsiimadii ugu badneynd ee Dhaqaale wuxuu dhacay xilligii aan anaga haynay talada
Dhageyso: Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Xildhibaan Golaha Shacabka oo dib ugu soo laabtay magalada Muqdisho
Daawo: Ra’iisul Wasaare Khaire oo daah-furay Shirka Meel Marinta Istaraatiijiyadda horumarinta xannaanada Xoolaha
Daawo: Dowladda Federaalka Soomaaliya oo AMISOM kala wareegtay Garoonka Cayaaraha kubada Cagta ee Stadium Muqdisho
War-murtiyeedka ka soo baxay shirkii dib-u-heshisiinta Galmudug ee Dhuusamareeb